दूर्जेय चेतना: यसरी आरम्भ हुदो रहेछ समय !!१!!
Browse » Home » यात्रा » यसरी आरम्भ हुदो रहेछ समय !!१!!
17 comments to “यसरी आरम्भ हुदो रहेछ समय !!१!!”
नेपाल आउनुभएको रहेछ । पहिले शिर्षक अनि फोटो हेरेर पढ्न सुरु गर्ने बानि छ । फोटो हेर्दा उतै को राख्नुभा'को होला सोच्दै थिँए ।
देख्नुभो त कहिलेकाँहि चाँडो उठ्दा पनि कस्तो रमाइलो हुँदोरहेछ । हा हा हा
सुन्दर फोटोहरु अनि लयात्मक र कलात्मक शब्दहरु का लागि धन्यवाद !
Its nice to be in Nepal always. I wish you haveagreat time there.
मातृभूमिको बिहानीमा सबैले रम्न पाउन् , शुभकामना । मलाइ एउटा गित पो याद आयो - बिहान उठ्ने बितिकै हिमाल देख्न पाइयोस् , यि हातले सँधै सँधै नेपाल लेख्न पाइयोस् ।
दूर्जेय सर,शिर्षकमा अंक १ देखेकोले ,पाहुना बनि नेपाल बस्दाको तपाइँको निजी अनुभवलाइ पढ्न प्रतिक्षा गर्नेछु अंक २ , ३ को लागि ।
एकदमै भावनाप्रधान र मनछुने लाग्यो यो पोष्ट।
तस्विरले देखाउन नसकेको केही कुरा तपाईको शब्दहरुले बोलेका छन भने, शब्दले वयान गर्न नसकिने धेरै कुरा तस्विरमा देखीन्छ ।
समय सायद सबैतिर यसरी नै आरम्भ हुन्छ होला, तर समयमा कहिल्यै नउठ्ने भएकोले यो शुन्दरताबाट सधैं बन्चीत छु म पनि ।
लेखाई र तस्विर दुबै सुन्दर छन। तपाईले देखाउन खोज्नु भएको सबै कुराहरु तस्विरमा देखिन्छन । एकदमै रोचक पोष्ट !
अहिलै रातिको १२ वज्न लागि सक्यो खै ८ नबजी त कुनै हालतले उठिदैन विहान । तर तपाईँको लेखाई र यि सुन्दर तस्विरहरूले जिस्काउँदैछन् मलाई..मेरो अल्छीपनलाई । म कल्पना गर्दैछु..यसरीनै सधैँ समय आरम्भ भएको हेर्न पाए कति शुभ हुन्छ होला त्यो पुरा दिन!!! भावप्रदान लेखको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!!
सुन्दर तस्वीर र बान्की मिलेका मिठा शव्दहरु पढिरहुँ झैं लाग्ने , घरको सम्झना र माया मिसिएकोले हो कि के हो, मलाइ त भावुक बनायो यो लेखले ।
एकदमै मन छुने पोष्ट अनि प्रस्तुती पनि । सानो भन्दा सानो कुरामा पनि रमाउन सिक्नुभएको रहेछ तपाई । यहाँ मान्छेहरु यति साह्रो यन्त्रवत् भै सके की आफैलाई चिन्दैनन् ।
निकै भावनात्मक लेख रहेछ । हिजो- अस्ती एक पटक फोटो मात्रै हेरेकी थिएँ, आज पुरै पोस्ट पढेपछी भने निकै रमाईलो लाग्यो र भावुक पनि बनायो तपाईको पोस्टले ।
एकदिनको निन्द्रा बिग्रदाँ यस्तो रोमान्चक पोस्ट बन्दो रहेछ ...तपाईलाई त सधैं आधा रातमै निन्द्रा टुटोस भनेर सराप्नु पर्ला जस्तो लाग्यो :)। (जोक मात्रै है, तर पोस्ट भने साँच्चै नै पठनिय छ ।
एकदमनै मन हर्ने तस्वीरहरु ,घर छोडेर ब्यस्तताको बहानामा सुर्योदयको अवलोकन नगरेको पनि निकै भए । केटाकेटी छँदा बिहान उठ्न बाध्य पार्नु हुन्थ्यो तर अहिले याद आइरहेछ बिहानी सुन्दरताको त्यो मज्जा लुट्ने दिन पछि नआउने रहेछ सितिमिति । त्यो दिन शायद बिहान निद्रा नपर्नुको कारण हामीलाई यो टाँसो सँगै हामीलाई पनि एकछिन पुराना दिनमा बहलाउनु थियो यो ठोकुवा गरें है मैले ।
हैन दूर्जेय जी, येस्तई कुरा गरेर हाम्लाई पनि जापान आउन बाट कहिलेसम्म रोक्न सक्नुहोला ?
bilkul afnai kura! aafnai anubhav ani afnai aananda! kati maja le lekhnu bahyeko dai! ramilo bahyo ta padhna lai!ani tasbir haru ni kaati ramra rechan
मायाप्रिती जसरी लाए पनि राम्रो,
घरको गीत जुन भाकामा गाए पनि राम्रो
भने जस्तो भयो मलाई ।
मनै उप्काएर टाँसे जस्ता छन् भावना ।
हामीलाई चाही यही द्र्श्य बिहान-बेलुकीको आम मोहनी बन्न पुगेका छन् ।
तस्बिर लोभलाग्दा समात्नुभएको छ, अभिव्यक्ती पनि चखिलो !
अरुलाई जस्तै मलाई पनि तस्विरहरुले र तपाईंको भावनाले मुहुनी लगाए । कल्पना गर्दैछु म घर पुगेको बेला मेरो घरबाट बिहानै उठेर हेर्नलाई के होला ?
सम्झनाले बहकाउने लेख ! साह्रै राम्रो लाग्यो है | देश छोड्नु जति गाह्रो कुरा के छ ?
कबिता फुर्ने फोटोग्राफी गर्नु भएको रहेछ । आफु परियो साहित्यमा लम्फु गर्नु कसो? आफ्नै माटोको, आफ्नै मातृभूमीको सुन्दर कुरालाई आँफैले अनुभब गरेर बाँड्नु भएकोमा दुर्जेय जीलाई सलाम।